Kufuridzira kweanopisa anoshanda mhando yeforoma pane kwayo kuita - Aojie Mould Co., Ltd.
Kufuridzira kweanopisa anoshanda mhando yeforoma pane kwayo kuita
Iyo inopisa inoshanda mhando yeforoma ine pesvedzero huru pane yekuita uye hupenyu hwehupenyu hwehuvhu. Muhupenyu chaihwo nebasa, yedu workshop musangano inoda kuenderera kuvandudzwa mukugadzirwa uye kugadzirwa kweakasiyana mafomu, uye pachave nematambudziko mune yakatarwa mashandiro. Isu tichakurukura uye nekuchinjana matambudziko mukushandisa kwekutsika molds neShenzhen mold vagadziri
Iko kudzimisa kushomeka uye kutsemuka kwezvikamu zvinoshanda zveforoma uye kutsemuka kwekutanga mukuita kwekushandisa zvese zvine chekuita neanopisa mashandiro ehunhu.
(1) Nokuchengetedza muitiro, inova inokosha kubatana ari kugadzira muitiro vanofa anoshanda zvikamu. Kune iyo mold yeakakwira chiwanikwa chishandiso simbi, hunyanzvi zvinodiwa kune iyo metallographic chimiro senge carbide kugovera inowanzoiswa kumberi. Uye zvakare, iyo yekuchengetedza tembiricha renji inofanirwa kunyatso kudzorwa, iyo chaiyo yekudziya specification inofanirwa kuumbwa, iyo chaiyo yekuchengetedza simba nzira inofanirwa kutorwa, uye inononoka kutonhora kana inokodzera nguva annealing mushure mekugadzira inofanirwa kutorwa.
(2) Gadzirira kurapwa kwekupisa. Zvinoenderana nezvakasiyana zvinhu uye zvinoda kufa zvinoshanda zvikamu, pre pre kurapwa maitiro senge annealing, normalizing kana kudzima uye tempering inofanirwa kutorwa kunatsiridza iyo microstructure, kubvisa iyo microstructure kuremara kwekugadzira isina chinhu uye kugadzirisa tekinoroji yekugadzirisa. Mushure mekugadzirira kwakaringana kupisa kurapwa, iyo network yechipiri cementite kana cheni carbide inogona kubviswa, iyo carbide inogona kuve spheroidized uye kunatswa, uye kuenzana kugovera kwe carbide kunogona kusimudzirwa. Nenzira iyi, kudzima uye kupisa hunhu kunogona kuvimbiswa uye hupenyu hwehupenyu hwefa hunogona kuvandudzwa.
(3) Kudzima uye kutsamwa. Ichi ndicho chinongedzo chakakosha pakurapa kupisa kweforoma. Kana kupisa kukuru kukaitika panguva yekudzima uye kupisa, iyo yekushandira haizongokonzere kuomesa, asi zvakare inokonzeresa deformation uye kutsemuka panguva yekutonhora, izvo zvinokanganisa zvakanyanya hupenyu hwehupenyu hwefa. Munguva yekudzima uye kupisa kwefa, kukoshesa kwakakosha kunofanirwa kubhadharwa kudzivirira oxidation uye decarburization. Iyo yekupisa kurapwa maitiro maitiro anofanirwa kunyatso kudzorwa. Kana mamiriro ezvinhu achibvumidza, kupukuta kupisa kupisa kunogona kushandiswa. Mushure mekudzima, inofanirwa kudzikamiswa munguva, uye matanho akasiyana ekupisa anofanirwa kutorwa zvinoenderana nezvinodiwa zvehunyanzvi.
(4) Kushungurudzika kununurwa. Kufa zvikamu zvinoshanda zvinofanirwa kurapwa nekushushikana kwekununurwa mushure mekuomarara kwemuchina kubvisa kunetsekana kwemukati kunokonzerwa nekukanganisa machining, kuitira kuti tirege zvakanyanya deformation uye kutsemuka kunokonzerwa nekudzima. For Foroma pamwe yakakwirira nemazvo, kushushikana zororo tempering kurapwa kunodiwa mushure kukuya kana zvemagetsi machine, inova inoita kuti kudzikamisa Foroma zvakarurama uye kuvandudza upenyu basa.